အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? | USAHello ကနေသတင်းအချက်အလက် | USAHello
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ?
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? သင့်ရဲ့စမ်းသပ်အတှကျပွငျဆငျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲဆိုတာသိရန်ဖြစ်ပါသည်. စမ်းသပ်မှုအတွက်မျှော်လင့်ထားရန်အဘယ်သို့သောအကြောင်းသင့်မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုရှာပါ. လေ့လာစမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? ဒါဟာသင်မြျှောလငျ့နိုငျကဘာလဲ:
သင်က TASC စမ်းသပ်မှုယူစမ်းသပ်-approved site ကိုသွားပါဦးမည်
သငျသညျအွန်လိုင်း TASC စမ်းသပ် ယူ. မသွားနိုင်
သငျသညျ English သို့မဟုတ်စပိန်အတွက်စမ်းသပ်မှုယူနိုင်ပါသည်
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်5စိတျအပိုငျး, subtests ဟုခေါ်တွင် - တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းအရာဧရိယာဘို့တ (ဘာသာရပ်)
မြေတပြင်လုံးကိုစမ်းသပ်ကြာ7နာရီ 30 မိနစ်များ. ဒါပေမယ့်သင်ကယူနိုင်ပါသည်5ကွဲပြားခြားနားသောရက်အစိတ်အပိုင်းများ. ဒါကအလုပ်ရှုပ်လုပ်သားများနှင့်မိဘများအတွက်ကောင်းလှ၏. ဒါဟာသင်သီးခြားစီစမ်းသပ်မှု၏အသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်လေ့လာရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်. သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားကိုသိစိတျအပိုငျးယူနိုင်ပါသည်, ထို့နောက်ခက်ခဲအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အလေ့လာဖို့သင်၏အချိန်ကိုသုံးပါ.
သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူနိုင်ပါသည် အခမဲ့အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ သငျသညျအဆင်သင့်လျှင်ကြည့်ရှုရန်.
တချို့ကစမ်းသပ်က်ဘ်ဆိုက်များကွန်ပျူတာပေါ်မှာစမ်းသပ်ကမ်းလှမ်းရန်, အခြားသူများကိုစက္ကူပေါ်မှာစမ်းသပ်ကမ်းလှမ်းရန်, တချို့နှစ်ဦးစလုံးရွေးချယ်မှုပူဇော်.
သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စမ်းသပ်တာနေတယ်ဆိုရင်, သင်စမ်းသပ်ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် tools တွေကိုသုံးပြီးအဆင်ပြေရရှိရမည်. သင့်အနေအပျေါ tools တွေကြိုးစားနိုင် TASC အွန်လိုင်း tools တွေကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း. သငျသညျကွန်ပျူတာများမှအသုံးမနေတယ်ဆိုရင်, သင်အမှန်တကယ်ကွန်ပျူတာနှင့်သင်၏စမ်းသပ် site ကိုမှာလေ့ကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ, မောက်စ်နဲ့ကိုသင်စမ်းသပ်သုံးပါလိမ့်မယ်ကီးဘုတ်.
သို့မဟုတ်, သင်စက္ကူစမ်းသပ်ကြိုက်တတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ. ယင်းကိုသုံးပါ တာဝန်ရှိသူတဦးကအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကို စာရွက်ပေါ်တွင် TASC မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းထွက်ကြိုးစားရန်.
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် စက္ကူပေါ် TASC စမ်းသပ်တာ ခန့် အွန်လိုင်း TASC စမ်းသပ်တာ.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မေးခွန်းတွေအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိပါတယ်. တချို့ကကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုများအတွက်များမှာ, အခြားသူများစက္ကူစမ်းသပ်မှုများအတွက်နေစဉ်.
အကွိမျမြားစှာ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုကွန်ပျူတာနှင့်စက္ကူစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း. တစ်ဦးကမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသငျသညျအဖြေကိုတစ်ဦးရှေးခယျြမှုပေးသည်. မေးခွန်းကစာသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သို့မဟုတ်ပါကပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်မြေပုံအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်. ဒါဟာပုံဖြစ်စေခြင်းငှါ,, တစ်ဦးဇယားအပါအဝင်, စားပှဲ, သို့မဟုတ်ဂရပ်. စာသားသို့မဟုတ် image ကိုအောက်တွင်မေးခွန်းတစ်ခု, ပြီးတော့အဖြေကိုတစ်ဦးစာရင်းဖွစျလိမျ့မညျ, ဒီဥပမာများကဲ့သို့လက်ျာဘက်. သင်ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လက်ျာတစျဦးကိုရှေးခယျြ, သို့မဟုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်အမှတ်အသားတစ်ခုအောင်.
အကွိမျမြားစှာ-select လုပ်ပါမေးခွန်းများကိုအများအပြား-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုတူအောင်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအစားမယ့်တဦးတည်း၏နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုမှန်ကန်သောအဖြေကိုရွေးဖို့ကိုသင်မေးဖို့.
မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများနှင့်မျိုးစုံ-select လုပ်ပါမေးခွန်းများကို ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာအဖြေကိုသင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိစဉ်အမြဲဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သင်ရုံညာဘက်တဦးတည်းထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်(s ကို). ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ပေးထားသောနေကြသည်သတင်းအချက်အလက်များမှာဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်. အလွန်ဂရုတစိုက်မေးခွန်း Read, လွန်း. ဒါဟာသင်နည်းနည်းလှည့်စားစေခြင်းငှါ, ဥပမာ -, ပြောစေခြင်းငှါ,, စစ်မှန်တဲ့ဘယ်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး?
Gridded တုံ့ပြန်မှု (အဖြေကို) စက္ကူနှင့်ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုအပေါ်သင်္ချာမေးခွန်းများကိုများအတွက်အသုံးပြုကြသည်. သင်သည်သင်၏သင်္ချာစမ်းသပ်မှုယူမတိုင်မီသင်သည်သင်၏အဖြေကိုဝင်၏ဤနည်းလမ်းများဖို့အသုံးပြုရရန်လိုအပ်မည်.
Grid တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျနှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့အဖြေကိုဝင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျထိပ်မှာတစ်စတုရန်းစီနံပါတ်သို့မဟုတ်သင်္ကေတရေး. ထိုအခါသင်သည်အောက်ကကော်လံအတွက်သင်္ကေတ၏တူညီသောအရေအတွက်ကအတူစက်ဝိုင်း shading အားဖြင့်နောက်တဖန်အထဲတွင်ဖြည့်ပါ. အောက်ကအဖြေများအတွက် TASC သင်္ချာစာရွက်စမ်းသပ်မှုကနေဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 43.8. အဆိုပါဇယားကွက်များလွန်းကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုပေါ်မှာဤတူ.
drag-and တစ်စက်မေးခွန်းများကိုကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုအပေါ်သာဖြစ်ကြောင်း. အဆိုပါကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှု TASC ခေါ်ဆိုသောအရာကိုကိုအသုံးပြုသည် “နည်းပညာ-တိုးမြှင့်” မေးခွန်းများကို. ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုသင် screen ပေါ်မှာအမှုအရာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြု. မောက်အသုံးပြုခြင်း, သငျသညျအဖြေဧရိယာမှမေးခွန်းတစ်ခုဧရိယာကနေစာသားမ boxes တွေကိုရွှေ့မည်. သို့မဟုတ်သင်သေတ္တာများအကြားမျဉ်းဆွဲစေခြင်းငှါ,. မေးခွန်းတွင်ထည့်သွင်းရန်ညွှန်ကြားချက်ရှိလိမ့်မည်. သင်တစ်ဦး mouse ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိလျှင်, နည်းပညာကအလွန်အခြေခံများနှင့်လွယ်ကူသည်.
သင့်ရဲ့ TASC စမ်းသပ်မှုအဖြေတစ်ခုရေးသားဖို့သငျသညျလိုအပ်ကြောင်းမေးခွန်းများကိုပါဝငျမညျ. ဒါဟာရေတိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးအက်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
prompt ကိုရေးသားခြင်း (စာစီစာကုံး): t ကိုမိမိအသင့်ရဲ့အရေးအသားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို item တစ်ခုမဟုတ်တော့ကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့မဟုတ်ရိုက်အဖြေဖြစ်ပါသည်. သင်ပေးထားသောနေကြသည်တစ်ဦးခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်အပိုဒ်ရေးလိုက်ရပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျစက္ကူပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် TASC စမ်းသပ်မှုယူနိုင်ပါသည်. မတူညီတဲ့ပုံစံများကြိုးစားပါ - သင်ရှေ့ဆက်အချိန်လေ့ကျင့်လျှင်သင်မေးခွန်းအမျိုးအစားများအားလုံးဖြည့်စွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်!
အဆိုပါ Download တာဝန်ရှိသူတဦးကနမူနာမေးခွန်းများကို စာရွက်ပေါ်တွင် TASC မေးခွန်းများကိုကြိုးစားရန်.
ယင်းကိုသုံးပါ TASC အွန်လိုင်း tools တွေကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ TASC မေးခွန်းများကိုကြိုးစားရန်. သငျသညျဤမေးခွန်းများကိုကြိုးစားကြကို Google က Chrome browser ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? ငါး subtests ရှိပါတယ် (ဘာသာရပ်များ) အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, သိပ္ပံ, သင်္ချာအတတ်ပညာ (တိုတောင်းသောအဘို့အသင်္ချာ), စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ: စာဖတ်ခြင်း
အဆိုပါစာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ကြာ 85 မိနစ်များ. ဒါဟာမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်, ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဆွဲ-and တစ်စက်သို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများ, တစ်ဦးဆောက်လုပ်ထားအဖြေကိုလိုနှင့်မေးခွန်းတစ်ခု.
သငျသညျသငျဖတျခကျြမြားနှငျ့ပတျသကျသောပစ္စည်းများထူးမည်. သင်ဖတ်ပါလိမ့်မယ် 75 % ပြန်ကြားရေးစာသား, ထိုကဲ့သို့သောသတင်းစာဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်လိုက်ဖို့အက်ဆေးအဖြစ်. သင်ဖတ်ပါလိမ့်မယ် 24 % စာပေစာသားကို, ထိုကဲ့သို့သောဝတ္ထုထဲကနေကောက်နှုတ်ချက်အဖြစ်, ပြဇာတ်သို့မဟုတ်ကဗျာ.
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ ပို TASC ဖတ်နေ subtest အကြောင်းကို.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ: စာအရေးအသား
အဆိုပါအရေးအသားစမ်းသပ်ကြာ 110 မိနစ်များ. အပိုင်း 1 ကြာ 65 မိနစ်များ. ဒါဟာမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများနှင့်ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဆွဲ-and တစ်စက်သို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများရှိပါတယ်. အပိုင်း2ကြာ 45 မိနစ်နှင့်တဦးတည်းသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်အက်ဆေးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိပါတယ်.
အပိုင်း 1 တိုင်းတာလိမ့်မယ်:
သဒ္ဒါ / အသုံးပြုမှု (30%)
စာလုံး / ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် / စာလုံးပေါင်း (25%)
အပိုင်း2(အဆိုပါအက်ဆေး) အပေါ်သွင်းယူလိမ့်မည်:
ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ, ပုဒ်ဖြတ်နည်း, သဒ်ဒါ, စကားလုံးရွေးချယ်မှု, နှင့်စာလုံးပေါင်း
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ ပို TASC အရေးအသား subtest အကြောင်းကို.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ
စမ်းသပ်မှုကြာလူမှုရေးလေ့လာမှုများ 75 မိနစ်များ. ဒါဟာမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်, ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဆွဲ-and တစ်စက်သို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများ, တစ်ဦးဆောက်လုပ်ထားအဖြေကိုလိုနှင့်မေးခွန်းတစ်ခု.
စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း, သငျသညျအမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာကသမိုင်းအပေါ်မေးခွန်းများကိုဖြေပါလိမ့်မယ်, စီးပွားရေး, ပထဝီဝင်, နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များ, နှင့်အစိုးရ. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသူတို့အားဒေသများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အခြေခံအခြေခံမူသင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုတိုင်းတာလိမ့်မယ်. သငျသညျစာသားကိုကျမ်းပိုဒ်မှာရှာနေပါလိမ့်မည်, သရုပ်ဖော်ပုံများ, ဂရပ်များ, နှင့်ဇယား. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ subtest အဆိုပါ TASC လူမှုလေ့လာမှုများအကြောင်းပိုမို.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ: သင်္ချာအတတ်ပညာ
အဆိုပါသင်္ချာစမ်းသပ်ကြာ 105 မိနစ်များ. အစိတ်အပိုင်းအတွက် 1 (55 မိနစ်များ) သင်တစ်ဦးဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးပါ. အစိတ်အပိုင်းအတွက်2(50 မိနစ်များ) ဂဏန်းတွက်စက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်, gridded တုံ့ပြန်မှုမေးခွန်းများကို, ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုအဘို့နှင့်ဆွဲ-and တစ်စက်သို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများ.
ယင်းသင်္ချာကိုစမ်းသပ်၏ကွန်ပျူတာဗားရှင်း On-screen ကိုဂဏန်းတွက်စက်ရှိပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်၏သင်္ချာအပိုင်းအတွက်အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အတူလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ် TASC အွန်လိုင်း tools တွေကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း. သင်တစ်ဦးအပေါ်မျက်နှာပြင်ဂဏန်းတွက်စက်မှတစ်လက်ကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုပိုနှစ်သက်ပါလျှင်, သငျသညျကိုအောက်တွင်စာရင်းထဲကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့စမ်းသပ် site ကိုမှာမေးပါ.
သင်စက္ကူ-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏စမ်းသပ်တာဆိုရင်တော့, သင်တစ်ဦးလက်ကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုရောက်စေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. Texas Instruments မော်ဒယ် TI-30XS အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်တာများအတွက်ဦးစားပေးဂဏန်းတွက်စက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပြည့်စုံလည်းမရှိ အတည်ပြုဂဏန်းတွက်စက်၏စာရင်း.
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ ပို TASC သင်္ချာ subtest အကြောင်းကို.
အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ: သိပ္ပံ
အဆိုပါသိပ္ပံစမ်းသပ်မှုကြာ 75 မိနစ်များ. ဒါဟာမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများနှင့်ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဆွဲ-and တစ်စက်သို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများရှိပါတယ်.
အဆိုပါသိပ္ပံစမ်းသပ်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, ဘဝသိပ္ပံ, နှင့်မြေကြီးနှင့်အာကာသသိပ္ပံ. သငျသညျအခြို့သောအခြေခံသိပ္ပံနည်းကျစိတ်ကူးများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းနားလည်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအသိပညာမှတ်မိဖို့လိုပမေ, ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလျှောက်ထား, သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းလျှောက်ထား. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ အဆိုပါ TASC သိပ္ပံ subtest အကြောင်းပိုမို.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစကေးအပေါ်ရမှတ်တွေ 300 သို့ 800 တစ်ဦးချင်းစီ subtest များအတွက်. နိမ့်ဆုံးသွားတာရမှတ်များမှာ:
သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါး subtests လွန်သွားသောအခါ, သင် TASC စမ်းသပ်လေပြီ.
ငါသည်ငါ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိ TASC စမ်းသပ်မှုယူဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းများ.
သင်လုပ်နိုင်သည် ယင်းယူဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့ လုပ်ငန်း စမ်းသပ် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါ အခမဲ့အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်စမ်းသပ် သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပါကထွက်ရှာရန်. သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အကြှနျုပျတို့သညျကိုနောက်ခြေလှမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Start အခမဲ့အွန်လိုင်းလူတန်းစား သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်. အချိန်မရွေး Start နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာ go.